Kubeflow: Fitaovana fianarana milina ho an'ny Kubernetes | Avy amin'ny Linux
Ny lahatsoratray anio dia hiatrika ny sehatry ny Fianarana mandeha ho azy (Learning Machine / ML). Momba manokana momba ny rindranasa open source antsoina "Kubeflow", izay miasa indray Kubernetes. Izay, araka ny efa fantatry ny maro aminareo, dia rafi-loharano misokatra ho fampandehanana automatique ny fametrahana, fanaovana scaling ary fikirakirana ireo rindranasa containerized.
"Kubeflow" na eo aza ny fahazoana amin'izao fotoana izao ambanin'ny stable version 1.2, araka ny hita ao amin'ny tranonkala ofisialiny ofisialy sy GitHub, ao amin'ny bilaoginy ofisialy, dia efa naneho hevitra momba ny manaraka kinova 1.3. Izany no antony hitrandrahana anio ity fampiharana ity.
Fitaovana kognitive: Open Source Deep Learning SW
Ary toy ny mahazatra, ho an'ireo maniry foana ny hijery lohahevitra iray vakiana, dia havelanay ireto rohy manaraka ireto ho an'ireo lahatsoratra teo aloha mifandraika aminao raha vantany vao vita ity lahatsoratra ity:
"Microsoft's Cognitive Toolkit (antsoina taloha hoe CNTK) dia fitaovana fianarana lalina (Machine Learning) de «Código Abierto» miaraka amin'ny hery anaty lehibe. Malalaka ihany koa, mora ampiasaina ary kalitaon'ny ambaratonga ara-barotra ahafahanao mamorona algorithme fianarana lalina afaka mianatra amin'ny ambaratonga akaiky ny an'ny ati-dohan'olombelona." Fitaovana kognitive: Open Source Deep Learning SW
1 Kubeflow: Tetikasa fianarana milina misokatra
1.1 Inona ny Kubeflow?
1.2 Toetra mampiavaka?
1.3 Inona ny Kubernetes?
Kubeflow: Tetikasa fianarana milina misokatra
Inona ny Kubeflow?
Araka ny anao tranokala ofisialy, ity tetikasa misokatra ity dia nofaritana toy izao:
"Tetikasa natokana hanamboarana workflow workflow (ML) amin'ny Kubernetes tsotra, mora entina ary azo refesina. Ny tanjony dia tsy ny hamerina hanangana serivisy hafa, fa ny hanome fomba tsotra hametrahana ireo rafitra loharano misokatra tsara indrindra ho an'ny ML manerana ireo fotodrafitrasa samihafa. Ka na aiza na aiza toerana itsoahan'i Kubernetes dia afaka mihazakazaka i Kubeflow."
Mandritra izany, ao amin'ny tranokalanao ao amin'ny GitHub, ampio fohifohy ity manaraka ity:
"Kubeflow no sehatra teratany ao amin'ny rahona ho an'ny asa fanabeazana amin'ny milina: fantsom-panafody, fanofanana ary famindrana."
Avy amin'izany dia azo tsoahina mora foana fa, ny tena tanjon'ny "Kubeflow" es:
"Ataovy mora foana araka izay azo atao ny mampivoatra ny maodely (ML), mamela ny Kubernetes hanao izay hainy atao: fametrahana mora sy azo averina, azo entina mamaky fotodrafitrasa maro samihafa, fametrahana microservices ary fitantanana malalaka miaraka amin'ny refy."
Anisan'ny mampiavaka ny "Kubeflow" azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Ahitana serivisy hamoronana sy hitantanana kahie Jupiter interactive. Ahafahana manamboatra ny fametrahana ny loharanon-tsolosaina mitovy sy hafa mba hampifanaraka azy ireo amin'ny filan'ny siansa data. Noho izany, manamora ny fanandramana amin'ny alàlan'ny onjam-piasa eo an-toerana, ary avy eo aparitaho ao anaty rahona rehefa ilaina izany.
Manome mpandraharaha asa fanofanana TensorFlow manokana. Izay azo ampiasaina hampiofanana maodely ML. Manokana, ny mpiasan'ny asa Kubeflow dia afaka miatrika asa fiofanana TensorFlow nozaraina. Mamela ny fahefana hametraka ny mpanara-maso ny fiofanana hampiasa CPUs na GPUs, ary avy eo hifanaraka amin'ny haben'ny cluster isan-karazany.
Manohana kaontenera TensorFlow Serving handefasana modely TensorFlow voaofana any Kubernetes. Ho fanampin'izany, Kubeflow dia tafiditra ao amin'i Seldon Core, sehatra loharano misokatra ho an'ny fametrahana modely fianarana milina ao amin'ny Kubernetes, ary ny Server NVIDIA Triton Inferance mba hampitomboana ny fampiasana GPU rehefa mametraka modely ML / DL amin'ny ambaratonga.
Ahitana ny teknolojia Kubeflow Pipelines. Izay ny vahaolana feno amin'ny famoahana sy fitantanana ny onjam-piasana ML farany. Ahafahana fanandramana haingana sy azo antoka, ampiasaina handahatra sy hampitahana ny fihazakazahana ary hamerenana ireo tatitra amin'ny antsipiriany isaky ny hazakazaka
Manolotra fototra maro rafitra. Hatramin'izay, ankoatry ny fiaraha-miasa tsara amin'ny TensorFlow, tsy ho ela dia hanana fanohanana an'i PyTorch, Apache MXNet, MPI, XGBoost, Chainer, sns.
Vaovao misimisy kokoa momba ny "Kubeflow" azo alaina mivantana amin'ny anao Bilaogy ofisialy.
Inona ny Kubernetes?
Koa satria, "Kubeflow" miasa amin'ny "Kubernetes", mendrika ny hamaritana azy araka ny anao tranokala ofisialy fa ity farany ity dia izao manaraka izao:
"Kubernetes (K8s) dia sehatra loharano misokatra ho an'ny automatisation ny fametrahana, ny scaling ary ny fitantanana ny fampiharana containerized."
Ary raha misy, maniry ny hihalalina "Kubernetes" Azonao atao ny mizaha ireo fanontana teo aloha sy farany mifandraika eto ambany:
Kubernetes 1.19 tonga miaraka amin'ny herintaona fanampiana, TLS 1.3, fanatsarana ary maro hafa
Docker vs Kubernetes: tombony sy fatiantoka
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Kubeflow», tetikasa loharano misokatra mahaliana sy maoderina eo amin'ny sehatry ny fianarana lalina, natao hampitomboana ny fahafahan'ny sehatra loharano misokatra «Kubernetes »; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Kubeflow: Fitaovana hianarana milina ho an'ny Kubernetes
Rakuten TV: Ahoana ny fomba hijerena atiny maimaim-poana amin'ny alàlan'ny PC PC-nao